फेरि असहज बन्यो सीमा नाका, भारतबाट फर्किएमा देखियो कोरोना, होला अबको अवस्था ? – ramechhapkhabar.com
फेरि असहज बन्यो सीमा नाका, भारतबाट फर्किएमा देखियो कोरोना, होला अबको अवस्था ?
अघिल्लो वर्ष विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न मुलुकभर चासो बढिरहेको बेला सबैभन्दा पहिले कञ्चनपुरमा बन्दाबन्दी भएको थियो । भारतबाट कोरोना कहरको त्रासदीबीच नेपाल स्वदेश फर्किरहेको बेला पश्चिमी नाकाहरु व्यवस्थापनका लागि चैत १० मै स्थानीय प्रशासनले लकडाउन गरेको थियो । विस्तारै अवस्था सहज हुन थालेपनि अहिले फेरि कोरोनाको त्रास बढ्न थालेको छ । गड्डाचौकी नाकामा आवागमन केही सहज भएपनि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका ७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको खबर राजधानी दैनिकले छापेको छ ।
सिन्धुलीमा पनि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन ब्युँताइँदै
सिन्धुली : कोरोना संक्रमणको त्रास बढेपछि सिन्धुलीमा थप सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य माक्सको प्रयोग गर्न र सेवा ग्राहिलाई समेत माक्स लगाउन लगाएर मात्र कार्यालयको सेवा प्रवाह गर्न भनेको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋद्विप्रकाश सिटौलाका अनुसार सबै सरकारी कार्यालयमा सामाजिक दुरी कायम गर्न, माक्स लगाउन र स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। ‘यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम बढ्न सक्ने भएको भन्दै जिल्लाका सबै स्थानीयतहमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय समेत भएको छ’, सिटौलाले भने।
झन्डै एक वर्षअघि जिल्लामा स्थापना गरिएका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन कोरोना भाइरसको जोखिम कम हुँदै गएपछि विस्थापित गरिएको थियो। छिमेकी मुलुक भारत लगायतका सीमा क्षेत्रमा पुनः कोरोनाको जोखिम बढेपछि जिल्लामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन पुनःस्थापना तथा स्वास्थ्य सतर्कताका अपनाउन आवश्यक सम्पूर्ण कार्य तत्काल गर्ने निर्णय भएको स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख जितेन्द्र शाहले बताए।
गत चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन हुँदा सिन्धुलीमा १ सय ३३ वटा आइसोलेसन र ५ सय बढी क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको थियो। ‘विद्यालय, सामुदायिक भवन लगायतका बनाइएका त्यस्ता क्वारेन्टाइनहरू हटाएर विद्यालय संचालनमा आएका छन्। हामी फेरि सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरेर पूर्व तयारीमा लागेका छौं’ , शाहले भने। शाहका अनुसार ४७ बेडको आइसोलेसन भने सिन्धुली सदरमुकाममा संचालनमै रहेको छ। आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको सुविधा भएको ४७ बेडको कोभड १९ युनिट अस्पतालको ४७ बेड आइसोलेन तयारी अवस्थामा भएको उक्त अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रलाद पोखरेलले बताए।
कोरोना संक्रमणको एक वर्षमा सिन्धुलीमा चार जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ३ सय ६६ जना कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन्। कुल ४ हजार २ सय ९९ जनाको स्वाव संकलन गरी पीसीआर टेष्ट गराउँदा सिन्धुलीमा ३ सय ७० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनीहरू मध्ये चार जनाको मृत्यु भएको हो। पछिल्ला समय सिन्धुलीमै पीसीआर टेष्ट गरिन्छ।
सरकारले निशुल्क प्रदान गरेको कोभिड-१९ विरूद्धको भ्याक्सिन सिन्धुलीमा ११ हजार १ सय ७७ जनाले लगाएका छन्। पहिलो चरणमा १ हजार ९९ सय, दोस्रो चरणमा १ हजार ७० र तेस्रो चरणमा ९ हजार ८ जनाले भ्याक्सिन लगाएको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ। लामो समय कोरोनाको संक्रमणबाट थलिएका व्यापारी, व्यवसायी तथा मजदुरहरू पुनः कोरोनाको संक्रमण बढ्न सक्ने भयले चिन्तित छन्।